Mampiorina ny mino ny tenin’Andriamanitra – FJKM Ambavahadimitafo Mampiorina ny mino ny tenin’Andriamanitra |
Publié le 09 février 2021 à 07:02
Alahady 07 Febroary 2021, alahady voalohany izay hibanjinana ny lohahevitra vaovao eto amin’ny sahan’ny FJKM : « Mampiorina ny mino ny tenin’Andriamanitra« .
Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Genesisy 15; 5 : « Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan’ny lay Izy ka nanao hoe: Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Dia hoy Izy taminy: Ho tahaka izany ny taranakao. »
Manasa anao hiara-hiombona amin’izany fotoana izany eto ambany